၏ကျောင်းသားများ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်တိုင်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ "စပါးကျီ (သို့မဟုတ်ပဲ" စတိုးဆိုင် ") အခြိနျမှနျမှသတိ" သို့မဟုတ် "alaya-vijnana" ကျော်ထိ မိ. လဲစရာကိုရှာဖွေပေမည်။ "စပါးကျီဝိညာဏ် '၏ရေတိုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ကအတိတ်အတွေ့အကြုံများနှင့် karmic အရေးယူဘို့အမြိုးမြိုး၏တစ်ဦးကွန်တိန်နာင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါပေမယ့်ထက်ကပိုပြီးရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Sanskrit စကားလုံး alaya စာသားတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းသို့မဟုတ်အခြေခံအကြံပြုထားတဲ့ "အားလုံးမြေပြင်" ကိုဆိုလိုသည်။
ဒါဟာမကြာခဏအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ် "substratum ။ " ထိုသို့ကိုလည်း "စတိုးဆိုင်" သို့မဟုတ်ဆိုလိုမှဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ် "စပါးကျီ။ "
Vijnana အသိအမြင်သို့မဟုတ်ဝိညာဏ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်များ၏ပဉ္စမဖြစ်ပါတယ် ငါးခု Skandhas ။ ဒါကြောင့်မကြာခဏအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောသော်လည်း "စိတျ," ကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ၏ပုံမှန်သဘောစိတ်ထဲမထားပါ။ ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းထိုကဲ့သို့သောဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ functions များ, အခြားအ skandhas ၏အလုပ်အကိုင်များဖြစ်ကြသည်။
Alaya-vijnana ဖြစ်လျှင်, ဝိညာဏ်၏ substratum အကြံပြုထားသည်။ ဒီအနောက်တိုင်းစိတ်ပညာ "ဟုအဆိုပါမသိစိတ်တစ်ပိုင်း" ခေါ်ဆိုသောအရာကိုတူတစ်ခုခုရှိပါသလား? မဟုတ်အတိအကျပေမယ့်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းကဲ့သို့ alaya-vijnana ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိအသိအမြင်ပြင်ပအမှုအရာသိုလှောင်ကြောင်းစိတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ (Freud မွေးဖွားခဲ့သည်မတိုင်မီအာရှပညာရှင်များ 15 ရာစုနှစျမြားအကြောင်းကို alaya-vijnana အဆိုပြုခဲ့ကြသည်သတိပြုပါ။ )
Alaya-vijnana ၏ဝိညာဏ်၏ရှစ်အဆင့်ဆင့်၏အဋ္ဌဖြစ်ပါတယ် Yogacara , အတွေ့အကြုံ၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူအဓိကအားစိုးရိမ်ပူပန်သောမဟာယာနဒဿန။
ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, vijnana တစ်နည်းအရာဝတ္ထုနဲ့အသိဒြေဖြတ်သောအသိပညာကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာမျက်မှောက်သို့မဟုတ်အသံတစ်ခုနားကိုမှမျက်စိဆက်သွယ်သောအသိအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ alaya -vijnana အားလုံးသတိ၏အခြေခံအုတ်မြစ်သို့မဟုတ်အခြေခံဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရဲ့အတိတ်လုပ်ရပ်များအားလုံး၏တွေ့ကြုံပါရှိသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ကြုံ, sankhara , ပုံစံ bija သို့မဟုတ် "မျိုးစေ့များ," ဤမျိုးစေ့များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေး, ထင်မြင်ယူဆ, အလိုဆန္ဒများနှင့် attachment များကိုကြီးထွားရာမှ။
အဆိုပါ alaya-vijnana အဖြစ်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာသော။
ဤရွေ့ကားမျိုးစပါးကိုလည်း Karma ၏အစေ့အဖြစ်ဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။ Karma အဓိကအားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခြင်းနှင့်အတွေး, စကားလုံးနှင့်လုပ်ရပ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်သရုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အရှင် created the Karma က ripens သည်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်း (သို့မဟုတ်, အကျီဝိညာဏ်) တွင်နေထိုင်ဆိုပါတယ်, သို့မဟုတ်ပါကဖယ်ထုတ်ပစ်သည်အထိပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာများ၏တော်တော်များများကျောင်းတွေထိုကဲ့သို့သော meritorious ပြုမူဖျော်ဖြေသို့မဟုတ် bodhicitta ပွုစုပြိုးထောအဖြစ်, အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် Karma ဖျက်သိမ်းရေးအဘို့အလေ့အကျင့်များနှင့်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်။
Yogacara ပညာရှင်များကိုလည်း alaya-vijnana ၏ "ထိုင်ခုံ 'ခဲ့ကြောင်းအဆိုပြုထား ဗုဒ္ဓသဘာဝတရား , ဒါမှမဟုတ် tathagatagarbha ။ ဗုဒ္ဓသဘာဝတရား, အခြေခံအားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါ၏အခြေခံသဘောသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအခြေခံကျကျကျနော်တို့ Buddhahood နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များမှာလို့ပဲ။ အခြားသူတွေအတွက်ပြီးသားကျွန်တော်သတိထားမဟုတ်လျှင်ပင်ပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပစ္စုပ္ပန်နေစဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာအချို့ကျောင်းများမှာတော့ဗုဒ္ဓသဘာဝတရားတစ်ခုအမြိုးအနှယျသို့မဟုတ်အတွင်းတူတစ်ခုခုအဖြစ်တည်ရှိဖို့နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ဗုဒ္ဓသဘာဝတရားငါတို့သည်တစ်စုံတစ်ခုသည်မဟုတ်, ကျနော်တို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ။
အဆိုပါ alaya-vijnana "ကျွန်တော်တို့ကို" ထို့နောက်အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးရှိသောနှစ်ဦးစလုံးကြောင်းအရာအားလုံးကိုတစ် repository ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသို့သော်မိမိကိုယ်ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ် alaya-vijnana ၏မထင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
ဒါဟာပိုပြီးကျွန်တော်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဘို့အမှားယွင်း attribute တွေတစ်ဦးစုဆောင်းမှုနဲ့တူရဲ့။ နှင့်ခေတ်သစ်စိတ်ပညာတို့ကအဆိုပြုထားသည့်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်ကိုကဲ့သို့, သိုလှောင်ရုံဝိညာဏ်ရဲ့ contents ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရပ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအသက်တာကိုတွေ့ကြုံခံစားလမ်းကိုပုံဖော်။
အဆိုပါ bija မျိုးစပါးပင်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်အခြားအရာအားလုံးရိပ်မိပုံကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ Thich ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုဟန် ဇဗုဒ္ဓရဲ့သွန်သင်ခြင်း (။ Parallax စာနယ်ဇင်း, 1998, p 50) ၏နှလုံးသားများတွင် wrote:
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်များ၏အရင်းအမြစ်, မြင်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်း, ဆယ်လူသည်မိုဃ်းတိမ်ကိုကြည့်ပါကဆယ်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုရှိရလိမ့်မည်။ တကခွေးအဖြစ်ကိုရိပ်မိနေသည်ဖြစ်စေ, တစ်ဦးရိုက်နှက်သောသံတူသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်ဝိညာဏ်တည်ရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအင်္ကျီကိုမူတည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကို-ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တရများကျွန်ုပ်တို့၏အမျက်ဒေါသပေါ်မှာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားအမြင်သူတို့နှင့်အတူဘာသာရပ်၌ရှိသမျှသောအမှားများကိုသယ်ဆောင်။ "
အသိပညာ - - အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အသိပညာ၏အရာဝတ္ထုမဟုတ် Yogacara မှာ, vijnana ကပြောသည်ရဲ့။
ဤသည်ဘာမျှမရှိကွောငျးမဆိုလိုပါ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ရိပ်မိသကဲ့သို့အလျှင်းမတည်ရှိ။ အဖြစ်မှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားအမြင်အထူးသဖြင့် alaya-vijnana အတွက် vijnana ၏ဖန်တီးမှုဖြစ်ကြသည်။ ဒီကိုနားလည်ခြင်းသည်ပညာ၏အချုပ်အခြာဖြစ်ပါသည်။
Zhangzi ရဲ့ (Chuang-Tzu ရဲ့) လိပ်ပြာအိပ်မက်ပုံဥပမာ
စာရင်းဝင်ဆော့ဝဲသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းသစ်ပင် မှစ. တစ် GEDCOM ဖိုင်မှတ်တမ်းဖန်တီးနည်း
သင့်ရဲ့ဆေးပြင်းလိပ် Humidor အတွက်စိုထိန်းသိမ်းပါဖို့ကိုဘယ်လို
ဘေးထွက်ပုံပြင်အားဖြင့်ပြင်သစ်အင်္ဂလိပ်ဘေးထွက် - ရဲတိုက် la Hunaudaye သွားရောက်လည်ပတ်
ရေထဲမှာ Francium - သင်ရေအတွက် Drop Francium အကယ်. ဘာဖြစ်မည်နည်း
သင်ထောက်ကူစာရွက် - ပင်မ Idea Find လုပ်နည်း
ပြင်သစ်တွင် "Mentir" (အိပ်ရန်) Conjugate လုပ်နည်း
Motion ကို Magic
အဆိုပါ Bat Mitzvah အခမ်းအနားနှင့်ပွဲ
အမေရိကန်အတွက်စက်မှုတော်လှန်ရေး3Key ကို Element တွေကို
Hardy ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Fiber ဘိလပ်မြေ side
အဆိုပါဘွဲ့၏ Bachelorettes တွေ့ဆုံရန်, ရာသီ 12
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Messerschmitt BF 109
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်မှူးကြီး John Singleton Mosby
2017 ACT ကုန်ကျစရိတ်များ, အခကြေးငွေများနှင့်စွန့်လွှတ်
အဆိုပါ Scariest သရဲခြောက်သောအိမ်, Movies ဘာတွေလဲ?
ချို့ယွင်းမှုများပြည်သူ့ ears ကအတွက်တွားသလား?
အမေရိကန်ပွင့်လင်းဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. ဘုံမေးခွန်းများအဖြေ